केयुमा सक्षम र नैतिकवान व्यक्तिको नियुक्ति गर्न डा. केसीको माग « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
केयुमा सक्षम र नैतिकवान व्यक्तिको नियुक्ति गर्न डा. केसीको माग
प्रकाशित मिति : २०७७, १ माघ बिहीबार १५:४५
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले आफूसँग भएको पछिल्लो सत्याग्रहमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुने गरी तथा सक्षम र नैतिकवान व्यक्तिको नियुक्ति हुने गरी सो प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।